Shina: Fiampangana voalohany ‘Jasmin’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2011 13:27 GMT
Nivoaka androany ny didim-pitsarana voalohany ilay mpikatroka miaro ny zon'ny sarambambe ao Chengdu, Li Shuangde, 47 taona, taorian'ny fisamborana sy fitazonana azy matetika nandritra ity lohataona ity.
Taorian'ny fitazomana azy nanomboka tamin'ny 23 martsa, nohelohina ho nanao hosoka “carte de crédit” i M. Li tamin'ny Alarobia teo ary voasazy higadra mandritra ny efa-bolana sy handoa lamandy 20.000 RMB. Araka ny hevitry ny “fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Shinoa”, dia azo iverenana amin'ny lasa ny didim-pitsarana an'i M. Li ka tokony ho tapitra amin'ny faran'ny volana jolay izao ny saziny.
Noeritreretina tontosaina talata maraina ny fotoam-pitsarana an'i M. Li tamin'ny voalohany, saingy araka ny nambaran'ireo mpanohana azy sy ny mpisolo vava azy taloha Ran Tong, nahemotra indray izany raha nahare ny fikasan'ny mpisolovava ny “maitre” Ran hiantso fa tsy meloka Atoa. Li ny filohan'ny Fitsarana .
Tonga tao amin'ny fitsarana ny mpanohana an'i Xing Qingxian tamin'ny talata, ary nanoratra ity tantara fohy ity :
Ny 31 mey, tamin'ny 8:50 aho dia efa tonga teo am-bavahadin'ny tribonaly ao amin'ny Districta Jinjiang, izay efa nohavaozina. Ara-dalàna tsara avokoa ny tao anatin'ny fitsarana, fa tsy mora tezitezitra tahaka ny fotoam-pitsarana nandehananay taloha. Reko tamin'ny mpahay lalàna iray fotoana fohy taty aoriana fa amin'ny 11 ora vao hanomboka ny fotoam-pitsarana, araka izany dia namonjy toeram-pisotroana dité teo akaiky teo aloha izaho sy ireo namana niaraka tamiko tany mba hiandry ny fotoana. Tamin'ny 10:45, niditra teo amin'ny fidirana toeram-pisavana izahay ary niakatra tao an-dalantsara ao amin'ny rihana faharoa, izay nahitanay ny renin'i Li Shuangde, niresaka kely izahay mialoha ny idirana ao amin'ny efitra fitsarana laharana faha-5. Kelikely ny efitra ka tsy nisy toerana ho an'ny olona olona taminay.
Teo ampidirana dia nahita tovovavy nifantina taratasy izahay, angamba ny mpiandraikitra ny tahirin-taratasim-pitsarana izy i. Mbola tsy tonga tao ny mpitsara, ka niandry hatramin'ny 11ora sy fahefany izahay avy eo niditra ihany ilay mpitsara vavy antsoina hoe Lǚ ka namonjy ny toerany. Nijery ireo antonta-taratasy izy dia nivoaka avy eo. Minitra vitsy taty aoriana, nisy mpitsara lahy niditra indray ary niteny hoe ny raharaha izay sahaniny aloha no hodinihina voalohany, ka niangavy anay izy mba hiala tao amin'ny efitra. Teo ampialana ny efitra dia nahita jiolahy tanora maromaro nentina hotsaraina tao izahay. Niandry ela tao an-dalantsara izahay, avy eo nisy mpitsara vavy nanatona anay nilaza fa tsy anio no hotontosaina ny raharaha momba an'i Li, ka tokony hody daholo izahay ary miandry ny fampilazana manaraka. Nanontany ny anton’ izany ny mpisolovava Ran Tong, ka hoy ilay mpitsara nanatona anay hoe efa nivonona ny hiarotena izy fa tsy meloka, ka tokony hiantso ny fianakaviany izy mba hanatrika ny fitsarana ary hanohana ny fandehan-draharaha. Na i Ran Tong na ny namana iray ao amin'ny fianakaviana no nilaza tamin'ny mpitsara fa tsy nisy olona nilaza fa niantso ny tsy mahameloka azy izy, ary te-hanamarina izy ireo fa nilaza izany tokoa i Li Shuangde, te-hahita raha izany tokoa no faniriany. Nanadihady ireo porofo momba ny toe-draharaha i Ran Tong ka tsapany fa tsy meloka mihitsy i Li Shuangde . Amin'ny maha mpahay lalàna azy tsy misy fomba tsy ahafantaran'i Li Shuangde mihitsy fa tsy heloka velively ny zavatra nataony. Voamarina koa izany ao amin'ny porofo nentin'ny fampanoavana, tsy misy dikany mazava ny fiaiken-keloka nataon'i Li Shuangde, na izahay koa no tsy nahazo ny tiany ambara. Satria tara vao voarain'i Ran Tong ny taratasy fampiantsoana avy amin'ny tribonaly, dia tsy nanam-potoana nihaonana mialoha tamin'i Li Shuangde intsony izy, fa nanantena fa mbola afaka hanadihady azy amin'ny fotoam-pitsarana. Nilaza tamin'ny mpitsara ny mpisolovava Ran Tong fa raha niaiky ny helony Li Shuangde, ka tena izay tokoa no fikasany ao anatiny, dia tsy hisolo vava an'i Li manoloana ny fitsarana izy. Tsy nanaiky izany ilay mpitsara.
Nisakafo maikamaika izahay, avy eo nihazakazaka teny amin'ny fonja ny mpisolovava Ran Tong, nanantena hahita ani’ Li Shuangde ary hanontany azy izay tena tadiaviny tokoa, ary koa ny ampahafantatra azy ny porofo rehetra momba ny toe-draharaha. Kanefa nilaza ny tao amin'ny fonja fa tsy ao intsony i Li Shuangde fa efa nafindra toeran-kafa, ary tsy mahazo vangiana na tsidihina izy. Ary ny tena nahavariana dia niantso an'i Ran Tong tamin'ny antso an-tariby ny renin'i Li Shuangde avy eo ary nangataka azy mba tsy hiverina hijery an'i Li Shuangde intsony.
Niverina nankany amin'ny fonja izay nitazonana an'i M.Li i Ran ny alarobia maraina, ary nilaza azy ny tompon'andraikitra tao fa efa nentina any amin'ny fitsarana any amin'ny Distrikan'i Jijiang izy ary efa nomena mpisolovava vaovao.
Taratasy fampiantsona an'i Jijiang ho avy any amin'ny tribonaly amin'ny 31 mey2011